CityMaps2Go Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Afaka andro vitsivitsy dia hanomboka ny fialantsasatry ny Noely ary maro no hanararaotra mandeha any amin'ny firenena hafa. Rehefa mandeha any amin'ny firenena izay tsy fantatsika isika, ny tsara indrindra dia ny fametrahana fampiharana ao amin'ny iPhone izay ahafahantsika mahafantatra amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza no misy antsika ary iza no solontenan'ny tanàna izay tsidihintsika. Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hanao an'io asa io isika, fa eo amin'izy rehetra, misongadina i CityMaps2Go Pro, fampiharana iray ahafahantsika misintona ny sarintany sy ny torolàlana momba ny dia hampiasaina raha tsy misy fifandraisana Internet. CityMaps2Go Pro dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 9,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana. amin'ny alàlan'ny rohy avelako eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
CityMaps2Go Pro dia manana salan'isa 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao, miaraka amin'ny hevitra mihoatra ny 4000. Amin'ny Espaniôla izany, mila iOS 9 farafaharatsiny ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izany.
Endri-javatra lehibe an'ny CityMaps2Go Pro
Drafitra vaovao: manaova toerana rehetra tianao hotsidihina. Mamorona lisitra ary ataovy akaiky foana ny hevitry ny dia rehefa ilainao izany.
Hizara votoatiny miaraka amin'ireo sakaiza - azonao atao izao ny mizara ny drafitry ny dia ataonao amin'ny namanao. Miaraka amin'ny CityMaps2Go, tsy mora velively ny mandamina fitsangatsanganana vondrona.
Mifandray na ivelan'ny Internet: CityMaps2Go dia miasa na dia tsy manana fidirana amin'ny Internet aza ianao, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny vidin'ny fivezivezena any an-tanàn-dehibe na tsy fahita firy ianao rehefa any anaty ala.
LOHAHEVITRA TANANA TOURISTA: CityMaps2Go dia misy sary sy vaovao feno ary vaovao farany.
SARY DETAILED: arabe, zotra gastronomika, lalan'ny bisikileta ... Ampidiro amin'ny sarintany an-tsipiriany amin'ny toerana misy anao ny ao anatiny.
Fikarohana sy fahitana: Mikaroha tranonkala manokana amin'ny anarany na mizaha sokajy toy ny trano fisakafoanana, maritrano, hotely, fivarotana, fisotroana sns.
FIVERENANA SY FISAROTANA: Mamorona kaonty ho an'ny mpampiasa ary ampidiro izany amin'ireo fitaovana iOS anao.
Ny rindranasa, ankoatry ny fanolorana aminay ireo asan'ny PRO rehetra, dia misy fividianana ao anaty rindrambaiko hankafizinay ireo fampiasa premium, izay tsy dia mendrika loatra raha tsy hoe mila fanampiana avy hatrany amin'ny mpamorona sy afaka manamboatra sarintany sy lisitra misy loko sy endrika samihafa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » CityMaps2Go Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ity rindranasa ity dia tsy misy ny asan'ny mpitety tranonkala, sa tsy izany?